Ny safidy tsara indrindra maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny Office MS ho an'ny 2020 | Avy amin'ny Linux
Tsy tsiambaratelo ho an'iza na iza ao anatin'ny zava-drehetra «Sistema Operativo», ny be mpampiasa indrindra mpampiasa iraisana mazàna no «Navegador web» ary ny «Aplicaciones Ofimáticas», toy ny a Mpanonta lahatsoratra, un Mpamaky rakitra PDF na ny fanta-daza «Suite Ofimáticas», izay andiana fampiharana (fonosana) fotsiny izay mamela ny fitantanana (famoronana, famakiana, fanovana) rakitra sy antontan-taratasin'ny asa isan'andro any amin'ny birao na trano.
Na izany aza, na dia matetika ampiasaina aza «MS Windows» sy ny mifanitsy aminy «Suite Ofimática»antsoina hoe «MS Office», ny marina dia izy roa, momba an'io «Sistema Operativo» momba ny «Distros GNU/Linux» ary ny hafa, mazàna misy tsara safidy maimaim-poana sy misokatra, na farafaharatsiny maimaim-poana, izay azon'ny tsirairay ampiasaina manao asa birao amin'ny kalitao sy fahombiazana.
Ary na izany, ny vaovao solosaina Mitondrà «Windows 10» miaraka amin'ny kinova fitsapana ny Microsoft Office napetraka, izay azonao atao ny mividy na manohy mampiasa azy amin'ny vahaolana piraty, na mitondra «Mac OS» miaraka amin'ny «Suite Ofimática» Miasa aho, ny idealy dia ny misafidy hampiasa a Maimaim-poana sy misokatra Office Suite na maimaim-poana, ary tsara kokoa sehatra maro.
Noho izany, etsy ambany ny famerenana kely ho an'ny tsirairay amin'ireo safidy tsara indrindra sy sarobidy «Suite Ofimáticas» hodinihina mandritra ity taona ity 2020 ho solon'ny «MS Office».
1 Solosaina maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny MS Office ho an'ny 2020
1.1 Maimaimpoana ary misokatra
Solosaina maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny MS Office ho an'ny 2020
LibreOffice, ny tranainy indrindra, fantatra sy efa niasa «Suite Ofimática» do Tontolo GNU / Linux mandeha amin'ity daty ity ankehitriny, amin'ny isan'ny Malagasy Bible 6.4.0 beta 1 ho an'ny sampana fitilianao, ny isan'ny 6.3.3 version ho an'ny sampana fampandrosoana maharitra, ary ny isan'ny 6.2.8 version ho an'ny sampana misy anao. Ary miaraka amin'ireo kinova ho an'ny «Windows, Mac OS y Linux» amin'ny endrika samihafa amin'ny rakitra fametrahana. Sy izahoAnisan'izany izao ireto fonosana manaraka ireto: Manorata, Calc, manaitra, sary, fototra ary matematika.
"LibreOffice dia biraon'ny birao matanjaka; ny interface madio sy ny fitaovana matanjaka ao aminy dia mamela anao hamoaka ny famoronana ary hampitombo ny vokatra. LibreOffice dia mampiditra rindranasa marobe izay mahatonga azy io ho birao fiasan'ny birao malalaka sy malalaka misokatra indrindra eny an-tsena: Mpanoratra, mpanodin-teny, Calc, tabilao, Impress, tonian-dahatsoratry ny famoahana sary, Draw, ny fisoratana anarana sy ny flowcharts, Base, ny database ary ny mifandraisa amin'ireo tahiry hafa, ary Matematika amin'ny fanovana ny rafi-matematika".
Raha tsorina «Libre Office» dia iray amin'ireo tetik'asa matanjaka indrindra ao amin'ny Tontolo GNU / Linux, miaraka amina interface tsara mpampiasa, maoderina sy sariaka, miaraka amin'ny fitomboana maharitra sy haingana ao anatin'ny Ecosystem rindrambaiko malalaka sy misokatra.
Calligra Suite avy amin'ny pejiny ofisialy dia a «Suite Ofimática» nozaraina tamin'ny rakitra voahidy (tar.xz) izay misy ny kaody loharano, na izany aza, azo apetraka mora foana avy amin'ny trano fitahirizam-bokin'ny ankamaroan'ny malaza indrindra izy io «Distros GNU/Linux».
Amin'izao fotoana izao dia mandeha amin'ny isan'ny 3.1.0 version ho an'ny sampana misy anao sy ny laharana kinova 3.2.0 Alfa ho an'ny sampana fampandrosoana anao. Na izany aza, ao anatin'izany dia azonao atao ny mahazo ny rakitra apetrany «MS Windows» en endrika .msi ho an'ny kinova an'ny 32 sy 64 sombina, ary na dia tsy manana rakitra fametrahana aza izy io «Mac OS» Ity dia azo apetraka eo amboniny, amin'ny alàlan'ny Package Manager fantatra amin'ny hoe Homebrew.
Ity iray ity «Suite Ofimática» dia ampahany amin'ny Vondrom-piarahamonina KDE, izay mivadika ho famokarana Rindrambaiko Maimaimpoana. Ary manolotra andiana fampiharana 8 feno izay mifanaraka amin'ny filan'ny fitantanana birao amin'ny birao antonony, izay ho an'izao manaraka izao: Teny, sehatra, takelaka, onja, Kexi, ary matetika ampiarahina amin'ny hafa amin'ny Tetikasa KDE, toy ny Karbon sy Krita, miampy Plans.
Birao maimaim-poana (Softmaker)
Amin'ireny, iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny roa tonta «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ny WPS y Birao maimaim-poana, hany ka tonga tampoka izy ireo amin'izao fotoana izao, farafaharatsiny 1 Linux Distro. Raha te hahalala bebe kokoa momba ireo 2 ireo ianao «Suite Ofimáticas», mamporisika anao izahay hamaky ny lahatsoratra teo aloha momba azy ireo: WPS y Birao maimaim-poana.
Ary raha irinao fotsiny ny maniry manolo serivisy birao an-tserasera, satria misy ireto safidy manaraka ireto:
Anisan'ireo maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Safidy maimaim-poana sy maimaim-poana ho an'ny Office MS ho an'ny 2020
Benjamin Chile dia hoy izy:
Mpampiasa Manjaro Linux hatramin'ny 2014 sy mpampiasa Linux hatramin'ny 2003. Tena tiako ny tatitrao momba ny fitaovan'ny birao izay mety hahatratra ny kalitao na hihoatra ny MS Office (LibreOffice sy ny KDE suite Caligra) ary miaraka amin'izay koa ny fikasako hameno ny asanao fikarohana amin'ireo fitaovan'ny birao ireo miaraka amina fonosana automatice roa an'ny birao izay natsofoka tao amin'ny tahiry Manjaro hatramin'ny 2017. Ilay voalohany dia nasongadin'ny developer sy mpikirakira Vitor Lope (@codesardine https://vitorlopes.me/) antsoina hoe MS-OFFICE-Online izay ahafahanao mampiasa ny serivisy natolotry ny Microsoft Office 365 ao amin'ny tranokalanao raha manana kaonty mailaka ao amin'ny Outlook ianao. Ity mpamorona ity dia nametaka ity fampiharana ity tao amin'ny Jade Desktop Environment ho an'ny linux.
Ary ny fonosana faharoa dia avy amin'ny orinasa OnlyOffice (https://www.onlyoffice.com/es/download-desktop.aspx), miaraka amin'ny fonosana Desktop OnlyOffice Docuements Desktop, izay vao nanitatra ny fampiharana maivana mba hanohanana ny fisie MsOffice mankany Linux. Ireo mpampiasa ny Arch Linux, Manjaro, Debian ary ireo fizarana hafa dia nitatitra fanombanana tsara na fanamarihana tamin'ity volana ity mikasika ny fifandraisan'izy ireo amin'ny rafitra Microsoft tany am-boalohany. Azo apetraka amin'ny endrika Linux toa ny Debian / Ubuntu, RPM ary SNAP.
Valio amin'i BenjaminChile
Misaotra anao noho ny hevitra feno sy tsara.
Iza no mifanentana indrindra amin'ny MS Office?
the_zero885@protonmail.com dia hoy izy:
Amin'ireo rehetra nanandramako dia azoko lazaina fa ilay manana ny mifanentana indrindra amin'ireo endrika Microsoft dia WPS Office, ny hany mahatsara azy dia izy irery.
WPS ihany no nanandramako ary tsara izany. Mandria, LibreOffice amin'ny zavatra rehetra.
karlo dia hoy izy:
Manao ahoana ny birao maimaim-poana?
Mamaly an'i karlo
the_zero885 dia hoy izy:
Tamin'ny fotoana farany nanandramako azy dia azoko lazaina fa manana mifanentana tsara amin'ny zavatra Microsoft izy, saingy ny kinova maimaim-poana dia tsotra ary raha mila safidy mandroso bebe kokoa ianao dia tsy maintsy mampiasa vola amin'ny kinova aloa. Azoko atao ny milaza aminao hijerena tsara kokoa ny LibreOffice ary raha mila fampifanarahana betsaka amin'ireo endrika Microsoft ianao dia manana Office WPS ianao.
Tsy nanandrana an'ity Office Suite ity aho fa ny interface tsara dia tena tsara sy mitovy amin'ny an'ny MS Office. Heveriko fa ny mifanentana amin'ireo endrika fisie dia tsy maintsy ho tsara tokoa raha manana kinova aloa. Raha tsy izany dia nanandrana WPS fotsiny aho ary toa tsara izany.
Orisai dia hoy izy:
Ireo rehetra ireo dia misy zavatra tsy ampy roa: mpitantana PIM sy tetikasa tafiditra
Mamaly an'i Orisai
Diso ianao, OnlyOffice raha loharano misokatra ao amin'ny fanontana Desktop Editors:
Fanehoan-kevitra sy fandraisana anjara tsara, Andrés!
Pentras dia hoy izy:
Rehefa lany ny fahazoan-dàlana ao amin'ny MS Office, dia nametraka ny WPS izay mandrakotra ny filan'ny automatisation birao rehetra aho, rehefa miasa miaraka amina antontan-taratasin'ny vondrona aho, heveriko fa io no iray izay mifangaro indrindra amin'ireo mpampiasa hafa mampiasa MS Office
Mamaly an'i Pentras
Miarahaba Pentras. Ary misaotra anao noho ny hevitrao momba ny hevitrao momba ny zavatra niainanao manokana.
KevinV dia hoy izy:
Salama, amin'ny macros hitako fa toa mifanentana amin'ny an'ny MS Office koa izany, fantatrao ve raha misy amin'ny kinova maimaimpoana na hampiasa azy ireo dia tsy maintsy manana ny fonosana premium ianao?
Valiny amin'i KevinV
Rafael Casares dia hoy izy:
Araka ny hitanao dia maro no manoratra amin'ny teny anglisy ary tsy mila fitaovana fanitsiana na synonyme. Ny wp napetrako dia tamin'ny teny anglisy ihany. Mpanoratra amin'ny teny Espaniôla aho ary indrisy fa tsy misy mahasolo ny teny, raha vao nisy iray tsara kokoa dia ny Teny tonga lafatra, saingy toa novidian'izy ireo hamongorana azy io fa tsy hifaninana amin'ny microsoft. Efa nanandrana ny zava-drehetra tao amin'ny openuse aho, izay ilay distro ampiasaiko, tsy misy fomba, ohatra ny fametrahana divay ary manandrana ny safidy mametraka teny na dia efa antitra aza. Ho ahy izay tena ampahany amin'ny tadin'ny mpanoratra dia ny fampiasana ny synonyme, zavatra fototra soratana amin'ny harena leksika sy ny birao malalaka no manana izany, saingy tsy ampy, tsy dia voasoratra firy, misy lesoka, miaraka amin'ireo safidy izay tsy fampiasan'ny besinimaro. Tamin'ny taona 1998, heveriko fa, nanoratra mailaka tamin'ny tetikasan'ny birao aho mba hangataka azy ireo hanambatra rakibolana mitovy hevitra sy antonony, gaga izy ireo ary naninona? Vitan'izy ireo izany, efa am-polony taona maro izay, eny, fampiharana izay ankoatry ny birao maimaim-poana farafaharatsiny amin'ny Espaniôla sy ao amin'ny subprogramma maromaro izay tsy maintsy sintonina misaraka ary mahafantatra ny fomba famoahana sy fampidirana ao amin'ilay interface. Saingy mampalahelo ny dikany amin'ny lafiny safidy ary tsy mifanaraka amin'ny teny tononina izy ireo satria tsy nanamarina raha toa ka mifanaraka tsara ireo synonyme kely arosony ireo. Raha nanao tésaurus tsara izy ireo dia tsy hikasika windows intsony aho ary hampiasa suse misokatra amin'ny solosaina lehibe izay ampiasaiko mba hanoratana fotsiny. Tsy haiko izay hatao bebe kokoa, fantatro fa tena ilaina izany saingy toa mino ny olona fa tsy mila mampiasa synonyme izy ireo.
Mamaly an'i rafael casares
Miarahaba anao Rafael! Miombon-kevitra tanteraka aminao momba ny Thesaurus izay tsy ananan'ny LibreOffice sy ny Office Suite hafa aho. Ho antsika izay mampiasa fampiasana an-tsoratra na matihanina na matihanina dia teboka tsy voavaha io. Misaotra anao noho ny hevitra nanankarena nataonao.
Luis E. dia hoy izy:
Nanambatra efitrano fiasana miisa 3 ao amin'ny linux aho noho ny asa fanovana antontan-taratasy samihafa. Anisan'ireny ny Office WPS, OnlyOffice (iray amin'ireo maivana indrindra sy mifanentana indrindra amin'ny antontan-taratasy MS Office) sy ny Free Office, raha ny marina dia misy interface mitovy amin'ny an'ny birao 2010 sy 2019. Anisan'ireo suite 3 ireo no ahafahako manangona ireo zavatra ilaiko samihafa. tamin'ny fotoana nanoratako ny antontan-taratasiko. Iray amin'ireo tombony ho an'ny Office Only and Free ny hoe ny interface amin'izy ireo dia amin'ny Espaniôla. WPS Office dia mandany vola kely hanovana ny fiteny interface, raha tsy izany dia milamina ny zava-drehetra!
Valiny tamin'i Luis E.
Miarahaba an'i Luis! Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny zavatra niainanao nandray anjara.